Oramada oo soo weerartay Tuliguuleed iyo milateriga oo dhaawacay Guddoomiyihii Degmada – Radio Daljir
Oramada oo soo weerartay Tuliguuleed iyo milateriga oo dhaawacay Guddoomiyihii Degmada
Agoosto 20, 2019 5:31 g 1
Qaar kamid ah shacabka Qoomiyada oromada ayaa weraar ku qaaday degmadda Tuliguuleed ,taas oo la dajinayeey dad barakacayaal ah sida ay shegeen dad goobjogayaal ah oo Radio daljir la hadlay.
Oromada caraysan ayaa weraar ku qaaday dadkaas Barakacayaasha ah,waxana goobta ka dhacay iskahorimaad u dhaxeeya oromada iyo dadki goobta la dajinayeey.
Ciidamadda Milatariga Itoobiya oo goobta tagay ayaa jirdil xoogan u geeystay shacabki halkaas ku sugnaa ee somaalida ahaa,waxaana dhaawac xoogan u geeysteen Guddoomiyihii degmadaas Haade oo loola cararay cisbitaal.
Guddoomiyaha tuulada la wareeray ayaa maanta la geyeey Cisbitaal kuyaala Magaaladda Jigjiga ee xarunta DDS,halkaas oo lagu dabiibayo.
Xaladda Guddoomiyaha ayaa laga dayrinaya waxaana dhaakhatirtu shegeen in afka uu dhig ka keenayo.
Sawiradan kore waa Shacabka Tuliguuleed waana goobtii Maanta dagaalku ka dhacay iyo shacabka oo barakacaya iyo Ciidamada Milatatiga itoobiya ah oo ah kuwa dharka madow qaba ee ka dambeeya qofkan idin muuqda iyo goobta kale ee ciidamada itoobiya joogan
Dowlad Deegaanka Soomaalida 154 Wararka 18910
Maxaa laga fili karaa xaalka doorasho iyo degganaan ee Jubbaland? (dhegayso)
Golis oo adeegyo cusub ku soo bandhigtay Garoowe (dhegayso)
gudoomiyaha tuliguuuled waa ina uu helaa xuquuqdiiisa waayo cadawga oromada ayaa gardaro cad ku dishay